PressReader - Ilanga: 2017-10-12 - UBHADLE EJELE NGELOKUDLWENGULA
UBHADLE EJELE NGELOKUDLWENGULA
Ilanga - 2017-10-12 - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI
KUZOGUGA iteki ngempelasonto kwezokugijima eNingizimu Afrika njengoba abaKwaZulu-Natal bezokube bekhiphana inkani kwiKing Cetshwayo Marathon ezokuba ngeSonto eRichards Bay bese kuthi eBloemfontein, eFree State kugaduliswane kwi-OR Tambo Marathon.
Kuyo yomibili le mijaho izingqwele zizokuba bomvu yimali kanti ngeyokuzibekela indawo kwiComrades Marathon yangonyaka ozayo ezokuba mhla ziyi-10 kuNhlangulana (June) isukela eMgungundlovu isongwe eThekwini. KwiKing Cetshwayo kulindeleke ukuba ingenelwe ngabasubathi abaningi kulandela ukubhuntsha kwiKKU 10km Challenge ebihlelwe yiKwaMashu AC.
IKing Cetshwayo yanonyaka izokuba ihambisana ne-42km, 21km ne-10km kanti isekwe ngoR159 000 ozohlukaniselwa izingqwele kuwo wonke amaba- nga. Imali yokubhalisa kulo mjaho ohlelwe yiMgezeni Athletics Club kaThami Mchunu ngu-R120 (42km), R80 (21km) no-R60 kwi-10km.
Kulindeleke ukuba kwenziwe izikhathi ezinhle kwazise uzokube uhamba endaweni eqondile kanti i-42km izojikeleza kabili. Imingenelo izokuba ithathwa nangoMgqibelo emahhovisi kaMasipala iKing Cetshwayo kusuka ngoMgqibelo nangeSonto kusuka ngo-4 ekuseni. Ngolwazi ngalo mjaho kungashayelwa enombolweni ethi: 083 688 8150.
Kusenjalo, abasubathi abathathu bakuleli uWayde van Niekerk, uLuvo Manyonga noCaster Semenya baqokelwe kwi-International Association of Athletics Federation (IAAF) Athlete of The Year ngenyanga ezayo eMonaco, eFrance.
Laba basubathi baqokwe ngemuva kokugila izimanga kwi-IAAF World Championships ebingoNcwaba (August) eLondon. UBHADLE ejele umdlali ozakhele udumo kwiAbsa Premiership ngomjiko oshiya abalandeli bebambe ongezansi obhekene necala lokudlwengula.
UMasibusane Zongo (27) ( osesithombeni) ogcine ukubonakala ebholeni ngesizini eyedlule egijima kwiRoyal Eagles edlala kwiNational First Division (NFD) kuthiwa ubhadle ezitokisini zasesiteshini eWestern Cape njengoba ephule imibandela yakhe yebheyili.
Lo mdlali uzithola ebhadle ejele nje, uvulelwe icala lokudlwengula yintombazane eneminyaka yobudala eli-19 eKapa ngoNhlolanja (February) wezi-2013.
Uboshwe mhla ziyisi-7 kuNdasa (March) ngonyaka ofanayo. Udedelwe ngebheyili. Emuva kokudedelwa ube esenyamalala okwenze kwaphuma incwadi egunyaza ukuba aboshwe ekuqaleni kwalo nyaka.
Ugcine ngokuboshwa njengoba kuvela ukuthi ubhadle esiteshini samaphoyisa akasalitholi ithuba lokudlala ibhola.
Okhulumela iNational Prosecuting Aurthority eWestern Cape u-Eric Ntabazalila ukuqinisikisile ukuthi lo mdlali ubhadle ejele kanti kungekudala lizoqala ukuqulwa icala lakhe. Nokho kuthiwa uyaliphika. “Ngingakuqinisekisa ukuthi uMasibusane Zongo ubekwe icala lokudlwengula intombazane eneminyaka yobudala eli-19 eGoodwood mhla ziyisi-9 kuNhlolanja ngowezi-2013.
Uboshwe mhla ziyisi-7 kuNdasa ngowezi2013 wavela enkantolo yesifunda eParow, eKapa.
Udedelwe ngebheyili ngemibandela yokuthi kufanele abuye avele enkantolo kodwa wangakwenza lokho yabe isicwila ibheyili yakhe waboshwa. Njengamanje ubhadle esiteshini samaphoyisa kuze kube kuphothulwa icala.
Icala bekufanele liqulwe mhla ziyisi-7 kuNhlangulana (June) nonyaka kodwa lahleliswa ngenxa yokuthi ummeli wakhe ubengekho enkantolo. Ummeli ucele ukuhoxa ukumela lo mdlali. Ube esethola ummeli omusha. Ugcine ukuvela enkantolo mhla ziyinhlanu kuMandulo (September) nonyaka kodwa langaqulwa icala lakhe ngenxa yokuthi abammeli bakhe bebengakakulungeli.
Kulindeleke liqale ukuqulwa kusasa ngoLwesihlanu.
Uzoqhubeka nokuhlala ejele lize liphothulwe,” kusho yena.
UZongo uzithola ebhekene nale nkinga nje ubevele edume ngokuhlupha emakilabhini abedlala kuwona njengoba ubengalubhadi ejimini ancamele ukuyodakwa.
Uke walinikwa ithuba nguCavin Johnson kwiPlatinum Stars kodwa wamuphoxa engalubhadi ejimini.
Utakulwe yi-Eagles ngesizini eyedlule kodwa kwazifanela njengoba engazange ashintshe.